बलिउड : ‘साहो’का लागि प्रभाषले १०० करोड पारिश्रमिक लिए ! – NepalDailyPost
नेपाल डेली पोस्ट २०७६, २३ श्रावण बिहीबार १६:५८
बलिउड : ‘साहो’का लागि प्रभाषले १०० करोड पारिश्रमिक लिए !
एजेन्सी, काठमाडौं। प्रभाषको मचअवेइटेड फिल्म ‘साहो’को ट्रेलरको पर्खाईमा छन् फ्यानहरु । यो फिल्मको टिजर, फस्टलुक र दुई वटा गीत दर्शकमाझ रिलिजमा आइसकेको छ । भर्खरै अभिनेता प्रभाषले सोसल मिडियामा सेयर गरेका एक पोष्टमा यही शनिबार अर्थात् १० अगष्टका दिन अफिसियल ट्रेलर सार्वजनिक गरिने बताएका छन् ।
यो जानकारीले फ्यानहरुमा दुई गुणा एक्साइटमेन्ट बढाएको छ । प्रभाषले आफ्नो इन्स्टाग्राममा डार्क तस्वीर सेयर गर्दै लेखेका छन्, ‘डार्लिङ्ग्स, ‘साहो’को दुनियामा कदम राख्नका लागि समय सुरु भएको छ । साहोको ट्रेलर १० अगष्टका दिन रिलिज गरिनेछ ।’
रिपोर्टका अनुसार मेकर्सले ‘साहो’को ट्रेलर रिलिज गर्नका लागि ग्राण्ड तयारी गरिरहेको छ । ट्रेलर सार्वजनिक गर्नका लागि अभिनेता प्रभाषले पाँच वटा शहर (हैदरबाद, चेन्नाई, कोच्चि, बैंगलुरु र मुम्बई)को टुर गर्ने भएका छन् ।
प्रभाषको यस टुरमा अभिनेत्री श्रद्धा कपूर पनि सँगै हुनेछन् । यो टु्र मुम्बईबाट सुरु हुनेभएको छ । पावरप्याक्ड एक्शन थ्रिलर यस फिल्ममा अभिनेता प्रभाषले हैरतअंगेज स्टन्ट सिन गरेका छन् । यो फिल्म २०१९ कै सबै भन्दा ठूलो फिल्मको रुपमा लिइएको छ ।
‘साहो’लाई तमिल, तेलेगु र हिन्दी भाषामा रिलिज गरिने भएको छ । समाचारमा आएअनुसार यो फिल्मको लागि अभिनेता प्रभाषलाई १०० करोड पारिश्रमिक दिइएको छ । सोही कारण प्रभाष भारतकै सबै भन्दा महंगो अभिनेता बन्न सफल बनेका छन् । अर्कोतर्फ अभिनेत्री श्रद्धा कपूरले भने यो फिल्मको लागि सात करोड पारिश्रमिक बुझेकी चर्चा छ ।
३० अगष्टबाट दर्शकमाझ ‘साहो’ रिलिजमा आउँदैछ । फिल्ममा प्रभाष र श्रद्धाको साथमा मन्दिरा बेदी, नील नीतिन मुकेश, ज्याकी श्रफ, चंकी पाण्डे लगाएत कलाकारहरु मुख्य भूमिकामा छन् । ‘साहो’को मेकिङमा प्रयोग गरिएको हाई क्लास भिएफएक्सको जताततै चर्चा भइरहेको छ ।
PREVIOUS Previous post: सुबिसुको कार्यालयमा आगलागी हुँदा आकस्मिक सेवाको देखियो कमजोरी
NEXT Next post: ५ बर्षीय नेपाली शाक्यले अमेरिकी जुनियर ओलम्पिकमा मच्चाए तहल्का
भोलि १० बजेपछि रबि लामिछाने छुट्दै ! वकिलले भने ‘गल्ति सालिकरामकै छ’ 3,716 views
रबि रियल हिरो हो भन्दै नायक निखिल उप्रेती गार्जिय 2,639 views